Ifenitshala yangaphandle yePhuli yokuThungelana kweSihlalo sePhuli, iFanitshala yangaphandle evela eTshayina ku-TopChinaSupplier.com
Indawo yokubonelela Furniture Ifenitshala yangaphandle Ifanitshala yangaphandle yePhuli yokuThungelana kweTafile
Ifanitshala yangaphandle yePhuli yokuThungelana kweTafile
Iifayile ze-10 I-US $ 360.00 / Sets
Kwisitulo sokuzonwabisa somyili wesitayile esinokulinda ukuba ufike ekhaya, jonga phambili kunefenitshala yaseZoodii. Ngomtsha wayo kunye contemporary styling, your living room will never have looked so good. With this comfortable sofa at home, your oIngxaki ingxaki kunokuba kukungafuni ukuyiyeka!
Igama lemveliso Ngaphandle kwegadi yePatio yeNtambo yeKhofi kunye neFenitshala yesihlalo
Uhlobo lwesihlalo Itafile yekofu kunye nesihlalo Model Inani I-TF-2501
umbala Selecitafile isiqinisekiso I-SGS yamkelwe
imathiriyeli Isinyithi frame (1.2+1.5 mm) Weight Net Isihlalo esinye (7.5kg)
Olefin rope 6mm Itheyibhile yeKofu (27kg)
Intsimbi eyomeleleyo eyenziwe ngumntu (14mm)
Ubukhulu (L * W * H) njengoko picture CBM 0.52 m³
I-QTY / 20GP 52 iiseti QTY / 40HQ 130 iiseti
Umbala welaphu elikhoyo:
A. I-Wicker kunye neMibala
Ifanitshala yethu elukiweyo yenziwe ngeyona nto intle yomgangatho wenziwe ngumntu. Ezi zixhobo zimangalisayo zinezibonelelo ezininzi, kubandakanya ukubonakala kwendalo, ukuxhathisa iinyembezi, ukuhlala ixesha elide, ukumelana ne-UV kunye nokumelana nemozulu. I-wicker yethu ikwanayo ne-environdinobungane, kwaye benziwe ngezinto ezinokuphinda zisebenziseke nezingenabungozi. Ifenitshala elukiweyo ingashiywa ngaphandle unyaka wonke. Ungumdibaniso wobugcisa obusebenza ngesandla kunye nefashoni yoyilo. Zonke iintlobo zeettan ziyafumaneka: iflethi, isiqingatha senyanga kunye nesangqa. Bavavanywa yi-SGS kwaye sinikezela ngemibala eyahlukeneyo ukuba ukhethe kuyo.
B. Indwangu - Imibala yeCushion:
Ilaphu le-cushion yi-100% isisombululo esidayiweyo se-acrylic canvas, lijelo lamanzi, lixinzelelo lomaleko, liqinile kwaye alikhoibala. Iikushini zethu zakhiwe ngokuthuthuzela kunye nokusebenza kwangaphandle. Bazaliswa ngumbala we-urethane othomalalisa okanye uxutywe nefibre ye-polyester. Imifanekiso eboniswe kule khathalogu ibonakalisa kuphela. Ukuba ikhonaUbungakanani phakathi komfanekiso kunye neyona mveliso yokwenene iya kulawulwa.
Zonke iimveliso zethu zikhoyakhiwe ngeeetyhubhu ezi-1.2, 1.5 kunye ne-1.8mm, eyenza ukuba yomelele ngokwaneleyo ukuze ibekezelele ubunzima kunye noxinzelelo. Senza umgubo oxutywe ukuze u-fIsidenge sikhuselwe ngokupheleleyo kukhuselo kwaye iba ngathi ayibonakaliI-nce iye yandiswa ngaphezulu ngelixa abanye abathengisi bengazange bayenze loo nto ukunciphisa iindleko. Ukupheka umgubo wempuphu kunezibonelelo zokuqina, yomelele, ayinyusi mhlwa kunye nobunzima bokukhanya.
A: T / T (iTransgraphic Transfer)
B: I-Western Union
I-Q2: Zingahanjiswa nini iimpahla emva kokuba kufakwe iodolo?
Kuxhomekeka kwiimveliso zakho ezenziwe ngokwezifiso, zinokubakho ukusuka kwiintsuku ezili-10 ukuya kwiintsuku ezingama-30,
Iimveliso eziqhelekileyo, sinokuhambisa kwi-oNjengoko sinesitokhwe, uninzi lwezinto esinokuzizisa ngeentsuku ezili-15 ukuya kwezingama-20! elona xesha lokuhanjiswa liya kuchazwa kwi-invoice yeprofayilii-nce i-oda ngu-firm / i / ied.
I-Q3: Kuthatha ixesha elingakanani ngaphambi kokuba abathengi bazifumane iimpahla?
Ngaphandle kwexesha lemveliso mentioI-ned ngentla, ihlala ithatha iintsuku ezili-10-25 eziphezulu zokuthumela ngenqanawa kuyo nayiphi na indawo ethe gabhu emhlabeni ukuxhomekeka kwizibuko lakho kwaye siya kukhetha indlela yokuhambisa ngokukhawuleza ukuze uqiniseke ukuba ufumana iimpahla kwangaphambili!
I-Q4: Ngaba izinto ezibonisiweyo kwiwebhusayithi zilungele ukuhambisa emva kokubeka i-odolo?
Uninzi lwezinto ezifunekayo zenziwe oi-nce i-oda ngu-firm / i / ied.Izinto ezinokubakho zinokubakho ngenxa yamaxesha ahlukeneyo, nceda contact abasebenzi bethu ngolwazi oluthe kratya.
I-Q5: Ndingayifumana njani ikowuti kwaye ndenze i-odolo?
iitafile zeephuli zexabiso eliphantsi
itafile yephuli yemabula
itafile yephuli yemini
I-5 ft itafile yephuli
I tafile ye-6ft echibini
ukugoba itafile echibini 7ft
itafile yangaphandle yedama
Iitafile zeephuli ezingama-7ft ezingabizi
ukugoba itafile yephuli